Horudhac: Real Madrid vs Celta Vigo … (Los Blancos oo eegeysa caawa inay gaarto guusheedii lixaad oo xiriir ah horyaalka La Liga) – Gool FM
Horudhac: Real Madrid vs Celta Vigo … (Los Blancos oo eegeysa caawa inay gaarto guusheedii lixaad oo xiriir ah horyaalka La Liga)
(Madrid) 16 Feb 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa eegeysa inay gaarto guusheedii lixaad oo xiriir ah horyaalka La Liga, marka ay garoonkeeda Bernabeu caawa ku soo dhoweyn doonto naadiga Celta Vigo.
Los Blancos ayaa haatan hoggaanka u haysa horyaalka La Liga inkastoo ay 52-dhibcood la wadaagto Barcelona oo ku jirta kaalinta labaad, laakiin haddii ay adkaato ayay hoggaanka horyaalka Spain saddex dhibcood ku qaban doontaa.
Dhinaca kale kooxda Celta Vigo ayaa ku jirta kaalimaha looga laaabto horyaalka La Liga, waxaana ay fadhisaa booska 18-aad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, waxaana kaliya ka hooseeya labada kooxood ee Leganes iyo Espanyol.
Taariikhda: Axad, 16 Feb 2020
Garsooraha: Javier Alberola Rojas (Spain)
Ciyaaryahanka Real Madrid ee Eden Hazard ayaa weli garoomada kaga maqan dhaawac canqowga ah, laakiin waxaa laga yaabaa inuu dib ugu soo laabto Real Madrid todobaadyada soo aaddan.
Isco iyo Karim Benzema ayaa la filayaa inay ku bilowdaan weerarka kooxda, inkastoo Gareth Bale uu taam buuxa ahaa isbuucii hore.
Fede Valverde iyo Ferland Mendy waa inay sii wataan booskooda kaddib qaab ciyaareed fiican oo ay soo bandhigeen xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale Kooxda Celta Vigo waxaa dib ugu soo laabanaya Kevin Vazquez kaasoo ganaax ka imaanaya, waana inuu si dhakhso leh u soo galaa booska daafaca garabka midig ee uu ka ganaaxan yahay Hugo Mallo.
Jeison Murillo ayaa qaba dhaawac yar oo jilibka ah, laakiin waxaa la filayaa inuu ku soo bilowdo saddexda daafac, waxaana wehliya Nestor Araujo iyo Joseph Aidoo.
Fedor Smolov ayaa la filayaa inuu hoggaamiyo weerarka isagoo ka garab ciyaari doona Iago Aspas, iyadoo Rafinha uu ku garab taagan yahay.
>- Kooxda Real Madrid ayaa guuleysatay 8 ka mid ah tobankeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku dheeshay horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay 8 ka mid ah sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahaday Celta Vigo tartammada oo dhan.
>- Celta Vigo ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto 22 ka mid ah 23-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahaayeen (Away) horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahaday Celta Vigo tartammada oo dhan.
>- Kooxda Real Madrid ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay 5 ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
War cusub oo ka soo baxaya mustaqbalka Paul Pogba ee kooxda Manchester United